ဒုက္ခသည်များသည်ဘဏ်ပြန်ကြားရေး & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
သင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိသည့်အခါ, သငျသညျအဘယျသို့သင်တို့ငွေနှင့်အတူလုပ်ဖို့အဘယ်သူယုံကြည်စိတ်ချဖို့မသိစေခြင်းငှါ. Some newcomers are afraid to use banks. သင်တစ်ဦးဘဏ်မှာလူစိမ်းရန်သင့်ပိုက်ဆံပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရပေမည်. သငျသညျရှေ့တျော၌ဘဏ်သုံးဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုတွေးမိဖူးဘူးဖြစ်နိုင်သည်. This page has bank information to help you understand US system.
ဒါကြောင့်အခိုးခံရသို့မဟုတ်ပျောက်သွားနိုင်သောကြောင့်အသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်တိုက်ခန်းတွင်သို့မဟုတ်သင်နှင့်အတူပိုက်ဆံပမာဏ Keeping ကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး. ဘဏ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏ပိုက်ဆံအများစုသိမ်းထားဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဘဏ်များနှင့်ချေးငွေသမဂ္ဂများလုံခြုံစွာများမှာ, နှင့်အမေရိကန်လူမျိုးသန်းပေါင်းများစွာဘဏ်များကိုသုံးပါ.
သငျသညျငွေရှာစတင်ရန်ပြီးတာနဲ့သင်ကဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်. ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ထံမှပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်စေသည်. ဒါဟာအစမေးလ်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်.
စစ်ဆေးခြင်းအကောင့်သင်ပိုက်ဆံငွေသွင်းနှင့်သင့်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့ခွင့်ပြု. သငျသညျအလုပ်လုပ်နေကြပြီးတာနဲ့, သင်တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်သိုက်အဖြစ်သင့်လစာရရှိနိုငျ - ဒီကအလုပ်ရှင်ထံမှသင့်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိုအကောင့်သို့တိုက်ရိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်.
သငျသညျအခြို့သောငွေစုရှိပါက, သို့မဟုတ်ချွေစတင်ချင်, သငျသညျသီးခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်. ချွေတာသုံးစွဲအကောင့်သင်အနာဂတျအတှကျပိုက်ဆံကယ်တင်ကူညီ. သင်တစ်ဦးငွေစုအကောင့်ထဲမှာပိုက်ဆံချပြီးခြင်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်. သို့သော်, အများဆုံးငွေစုအကောင့်ကိုသင် account တစ်ခုထဲကတစ်လလျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်ပိုက်ဆံယူမှသာခွင့်ပြု.
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်, သငျသညျပိုက်ဆံအနည်းဆုံးသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ရန်, သငျသညျမှတ်ပုံတင်နှစ်ခုပုံစံများကိုပြသရပါမည် (ID ကို) သင်မည်သူသက်သေပြ.
သင်သည်သင်၏ငွေစုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်အကောင့်စစ်ဆေးနေပြီးနောက်, သင်တစ်ဦးဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်စစ်ဆေးမှုများခံယူစေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ငွေကိုသင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကလာ.
A debit card isaplastic card you use to get cash out of an ATM (automated Teller စက်), which isamachine that holds money. ATMS are usually outside your bank. There are many other ATMS in stores and other public places, but the ATM does not belong to you bank, you may payafee to get cash.
You can also use your debit card to pay for things in stores, အွန်လိုင်း, and over the phone. Be careful using your debit card online. learn how to be safe shopping online.
သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်, သင်တစ်ဦး PIN နံပါတ်ရှိသည်ရှိသည် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်) သင့်ရဲ့ကဒ်ကိုသုံးပါရန်. သင်သည်သင်၏ PIN ကိုသင် ATM စက်များထဲကပိုက်ဆံယူသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဝယ်ဖို့အခါတိုင်းထည့်သွင်း. သငျသညျကဒ်ကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူရရှိလိုလျှင်, သူတို့က PIN ကိုသိကြမဟုတ်လျှင်မည်သူမျှအသုံးပွုနိုငျ.
အဆိုပါဝဲလ်တဖက်ထဲကနေနမူနာဒက်ဘစ်ကဒ် “ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်လက်စွဲ” အစီအစဉ်.
စစ်ဆေးမှုများသင်၌ဖြည့်ခြင်းနှင့်အရာများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးပုံစံများဖြစ်ကြောင်း. ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘဏ်၌သင်တို့၏စစ်ဆေးမှုများသိုက်ကိုလက်ခံရရှိအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, နှင့်သင့်ဘဏ်သင့်အကောင့်ထဲကသူတို့ကိုချေ. သငျသညျဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့စစ်ဆေးမှုများကိုသုံးနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ငှားခနှင့်အသုံးစရိတ်များအဖြစ်. သူတို့သည်သင့်သိလျှင်ဒေသခံစျေးဆိုင်လည်းသင့်ရဲ့စစ်ဆေးမှုများကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ.
သင်တစ်ဦးငွေစုအကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စစ်ဆေးနေအကောင့်ကိုရှေးခယျြဖွစျစေ, သင်တစ်ဦးအခမဲ့အကောင့်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းရှိမရှိမမေး. Bank employees should answer your questions and help you understand how banks and fees work. It is better to be able to deposit money (ဘဏ်ထဲမှာပိုက်ဆံသွင်းထား) နှင့်ငွေရုပ်သိမ်းပေးရန် (ဘဏ်ထဲကပိုက်ဆံယူ) အခကြေးငွေဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရခြင်းမရှိဘဲ. Most banks have some form of free checking account, so you should not need to payafee. You may get better rates atacredit union, which isatype of bank owned by its members.
သင်တစ်ဦးသည်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ဘဏ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့သငျသာသလောက်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့သတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများရေးလိုက်ပေမယ့်စစ်ဆေးမှုများအဘို့ငွေအလုံအလောက်ရှိမထားဘူးဆိုရင်, သငျသညျတခု overdraft အခကြေးငွေကောက်ခံပါမည် $50 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို. သင်တစ်ဦးအမှားလုပ်လိုလျှင်, သင်ကစစ်မှန်သောနားလည်မှုလွဲခဲ့ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးအဆိုပါကြေးပြန်အမ်းဖို့ဘဏ်ကိုမေးအဆိုပါဘဏ်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်, သူတို့ may သို့မဟုတ်ပါကပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ.
အမှားတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်, သင်ငွေစုအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဘဏ်အကောင့်စစ်ဆေးနေရှိငွေဘယ်လောက်စစျဆေးနိုငျ, အွန်လိုင်း, ဒါမှမဟုတ် ATM စက်များမှာ. သငျသညျရှိငွေပမာဏသည်သင်၏ဟုခေါ်သည် “ဘဏ်ငွေလက်ကျန်။” Overdraft အခကြေးငွေပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘဏ်လက်ကျန်ငွေအပေါ်အလွန်သတိထားလက်ပတ်နာရီစောင့်ရှောက်ဖို့ပညာရှိဖြစ်၏!
အဆိုပါဝဲလ်တဖက်ထဲကနေနမူနာဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက် “ဘဏ်လုပ်ငန်းအပေါ်လက်စွဲ” အစီအစဉ်.